AIRTOX 15 PUMP-IT insole | AIRTOX
AIRTOX 15 PUMP-IT halkaa
Qalliinka gaarka ah ee leh teknoolojiyada hawo-qaadidda la-waafajinta. Talaabo kasta oo la qaado waxay ku dhaqaaqdaa si gaar ah airflow system kaas oo ku riixaya hawada ciribta ilaa ubucda si loo hubiyo inaad adiga taakuleynta saxda ah haysato waqti kasta. Dhex gelinta barkinta Poron® ee si fiican u nuugista cagaha hore.
Waxaa loo sameeyay si ay u bixiso raaxada iyo xasilloonida ugu badan cagahaaga.
Qalab qaali ah oo ku habboon noocyo kala duwan oo kabo ah.
Qalliinka gaarka ah ee leh teknoolojiyada hawo-qaadidda la-waafajinta. Talaabo kasta oo la qaado waxay ku dhaqaaqdaa si gaar ah airflow system kaas oo ku riixaya hawada ciribta ilaa ubucda si loo hubiyo inaad adiga taakuleynta saxda ah haysato waqti kasta. Dhex gelinta barkinta ee Poron® ...
Caawinaada Arch adaptive
AIRTOX 11 Raaxo tusin Insoles
AIRTOX 12 Fresh-TECH halkaa Insoles
AIRTOX 13 comfoPEDIC halkaa Insoles